Miyaa qaboojiyaha loo isticmaali karaa kululaynta xilliga qaboobaha? | Lianchuang
Qaboojiyaha hawada waxaa loo isticmaali karaa kululaynta xilliga qaboobaha. Qaboojiyeyaasha hawada waxay u qaybsan yihiin laba nooc: mid waa hal qaboojiye nooca hawo qaboojiyaha ah, midka kalena waa qabow iyo kuleyl laba-saameyn qaboojiye. Kan hore waa la qaboojin karaa oo kaliya, kan dambena kaliya ma qaboojin karo laakiin sidoo kale kuleylka, laakiin qiimaha ayaa ka qaalisan marka la barbardhigo.
Taxaddarrada ku aaddan adeegsiga kululaynta qaboojiyaha hawada xilliga qaboobaha:
1. Markaad biyo shubayso, isticmaal biyo saafi ah intii suurtogal ah si aad u yarayso koritaanka bakteeriyada inta lagu jiro hawsha uumiga. Intaa waxaa dheer, biyaha haanta waa in si joogto ah loogu daraa oo si joogto ah loo beddelaa.
2. Ka dib markii qaboojiyaha hawadu socdo muddo dheer, xannibaadda boodhka iyo wasakhda ayaa saamayn doonta mugga hawada iyo saamaynta qaboojinta ee shaandhada iyo daahyada hawada. Waxaa ugu wanaagsan in la nadiifiyo labadii toddobaadba mar.
3. Markaad isticmaaleyso qaboojiyeyaasha hawada, masaafada waa inaysan aad ugu dhowaan. Haddii loo baahdo, tixgeli inaad isticmaasho qaar ka mid ah wasakhda huurka ama xarumaha huurka.
Qaboojiyeyaasha hawadu waxay leeyihiin heer-kulka 5-6℃ ka hooseeya taageerayaasha caadiga ah. Waxay leeyihiin awood koronto yar iyo qiimo jaban. Wax soo saarka qaarkood sidoo kale waxay leeyihiin shaqada kuleylka kuleylka waxayna ku daraan ion taban. Way yar yihiin wayna fududahay in la dhaqaaqo. Waa qabow thana fan, oo wuxuu cunaa awood ka yar qaboojiyaha. Marka labaad, marawaxadda hawo qaboojiyaha waxay leedahay shaqooyin kala duwan (ion xun / hawo kulule, iwm), taas oo ku habboon in la dhaqaaqo.
Ugu dambeyntiina, ka hooseeya laba nooc oo qaboojiye iyo kululeeye ah ayaa tixraacaaga ah. Waxaan rajeyneynaa inaad jeclaan laheyd iyaga.
Qaabka maya. DF-AF2808Khttps://www.gdszlian.com/df-af2808k-portable-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- la-oscillation-saari-biyo-taangi-2-kulaylka-dejinta-eco-function-imd-control-wax soo saarka /
Qaabka maya. DF-AT2501KG1https://www.gdszlian.com/df-af2501kg1-tower-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- with-oscillation-90oscillation-2-kuleylka-dejinta-eco-function-taabashada-xakamaynta-wax soo saarka /